Wasaaradda arrimaha gudaha oo raashin gar gaar ah u qeybisay dad naafo ah – Radio Muqdisho
Wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa raashin gargaar ah oo ay dalka keentay hey’adda bisha cas ee dalka Turkiga u qeybisay ilaa iyo Sadex Kun oo naafo ah, kuwaasoo ku nool Muqdisho.
Deeqda raashinka ah oo ka koobneyd Bur iyo Sokor oo wasaaraddu ka heshay dalka Turkiga ayeey u qeybisay ilaa Sadex Kun oo naafo ah, kuwaasoo ku kala nool degmooyinka Hodan iyo Kaaraan ee gobolka Banaadir.
Qaar ka mid ah cuuryaamiintii heshay raashinka gargaarka ah oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa uga mahadceliyay wasaaradda arrimaha gudaha deeqda ay u qeybisay.
Waxey codsadeen naafada in gar gaar dheeraad ah la soo gaarsiiyo maadama aysan awoodin ineey shaqeystaan, iyagoo tilmaamay iney u baahanyihiin daryeel dhan kasta ah.
Gudoomiyaha golaha naafada Qaranka Cali Cabdullaahi Salaad ayaa sheegay ineey wasaaradda arrimaha gudaha ka codsadeen in la soo gaarsiiyo raashinkan ay keentay hey’adda bisha cas ee Turkiga.
Naafada Soomaaliyeed ee ku nool dalka ayaa waxaa soo wajahay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah maadaama aysan qabin lixaadkooda.